वीरगञ्ज महानगरको बजेट पारित : के–के छन् कोरोना केन्द्रित कार्यक्रम ?
असार १२, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संशोधनसहित पारित भएको छ । महानगरको सातौं नगरसभामा पेश गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को नीति र कार्यक्रमसहितको बजेट शुक्रवार पारित भएको हो । महानगरका प्रमुख विजयकुमार सरावगीले
महानगरको नीतिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको महानगरले अगामी वर्ष समग्र कार्यक्रमका लागि रू. ३ अर्ब ८६ करोड ५१ लाखको बजेट ल्याएको छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउनको समयमा कार्यपालिकाले गरेका सम्पूर्ण निर्णय र खर्च नगरसभाले अनुमोदन गरेको छ ।
कोरोना परीक्षणका लागि स्थानीय दाताको सहयोगमा पीसीआर र आवश्यक उपकरण व्यवस्थापन गरेको महानगरले अगामी वर्ष रू. १ करोडको लागतमा बेग्लै कोरोना अस्पताल बनाउने भएको छ । १०० बेडको अस्पताल निर्माण गर्ने योजना महानगरको छ ।
अहिले वीरगञ्जको गण्डक अस्पतालमा अस्थायी कोरोना अस्पताल सञ्चालन भइरहेको छ । यसअघि कोरोना उपचारमा उपयोग गरिएको नारायणी अस्पताललाई खाली गरेर जेनेरल अस्पताल बनाइएको छ ।
निजी अस्पताललाई लामो समयसम्म कोरोना अस्पतालको रुपमा प्रयोग गर्न नसकिने भन्दै महानगरले आफ्नै स्रोतमा अस्पताल बनाउने तयारी थालेको हो । एक घर एक व्यक्ति पीसीआर परीक्षणका माध्यमबाट वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रलाई कोरोना मुक्त गर्ने योजना महानगरले राखेको छ ।
‘कोरोना महामारीले निम्त्याएको विपद्बाट महानगरका बासिन्दालाई मुक्त गर्नु पहिलो कार्यभार हो, एक घर एक व्यक्ति पीसीआर परीक्षण गरी समुदायलाई सुरक्षित बनाउनु मुख्य प्राथमिकता हो,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
पीसीआर उपकरण नारायणी अस्पताललाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । परीक्षणको दायरा बढाउन जनशक्तिलाई तालीम दिएर स्वाबको नमूना संकलन तीव्र बनाउने योजना महानगरले राखेको छ ।
सार्वजनिक स्थल, मुख्य नाका र भन्सार क्षेत्रमा कोरोनाविरुद्ध सतर्कतालाई निरन्तरता दिइने भएको छ । शंकराचार्य गेट, वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकीबाट निस्किने सवारी साधन, क्वारेन्टाइन, प्रिआइसोलेसन केन्द्र र कोरोना अस्पतालमा निसंक्रमणलाई निरन्तरता दिइने तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
महानगरले चालू वर्षमा ३२ वडाका ३५ हजार परिवारलाई राहत वितरण गरिएको बताएको छ । संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी र सरसफाईकर्मीलाई आवासका लागि क्वारेन्टाइन र भोजनको प्रबन्धका साथै अन्य क्वारेन्टाइन, प्रिआईसोलेशनको व्यवस्थापन महानगरले गर्दैआएको छ ।
कोरोना महामारी प्रभावित विद्यालय, अस्पताल, सपिङमल, उद्योग र कलकारखानालाई चालू वर्षको सम्पत्ति करमा ५०% सम्म छूट दिइने भएको छ । बक्यौता करमा १५ प्रतिशतको जरीवानालाई १० प्रतिशतमा झारिएको छ ।